မြန်မာလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ (၁၉၆) နိုင်ငံက လူငယ် ထောင်ကျော်ရှေ့ မှာ စကားပြောခဲ့သော(၅) မိနစ်စာ မိန့် ခွန်း | dawnmanhon
မြန်မာလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ (၁၉၆) နိုင်ငံက လူငယ် ထောင်ကျော်ရှေ့ မှာ စကားပြောခဲ့သော(၅) မိနစ်စာ မိန့် ခွန်း
မြန်မာလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ (၁၉၆) နိုင်ငံက လူငယ် ထောင်ကျော်ရှေ့ မှာ စကားပြောခဲ့သော(၅) မိနစ်စာ မိန့် ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူငယ်တွေရှေ့ မှာ "လူငယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ" မိန့် ခွန်းကို မဖတ်ကြားခင်မှာ Sir Bob Geldof က မသဉ္ဖာရွှန်းလဲ့ရည်ကို ပရိတ်သတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပန့် ဂီတအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sir Bob Geldof ဟာ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊ လူသားချင်းစာနာမူဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Bob Geldof ဟာ One Young World ရဲ့ နာမည်ကြီး counsellor တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။
မသဉ္ဖာရွှန်းလဲ့ရည် ၄င်းရဲ့ မိန့် ခွန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဆယ်စုနှစ် (၆) ခုစာ ကြာရှည်လျက်ရှိတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ အရင်းခံအကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်သူ့ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း စစ်အစိုးရ လက်ထက်အတည်ပြုခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ဟာ အစိုးရသစ်အတွက် အတားအဆီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူမ အနေနဲ့ လည်း စစ်အာဏာ သက်ရောက်မှု ရှိနေသ၍ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်ထုရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာ အဓိက ကျတဲ့ ပါဝင်မှုကိုဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုခဲ့ပြီး လူငယ်တွေဟာ အပြောင်းအလဲ ဖော်ဆောင်သူ သံတမန်တွေ ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဝေမျှခဲ့ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းတွေဟာ လူငယ်တွေ အချင်းချင်းကြား dialogues အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ရည်သန်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ လူငယ်တွေအတွက် ဘယ်တော့မဆို #ရွေးချယ်စရာ #alternatives တွေ ရှိနေဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အချင်းချင်း နားလည်ယုံကြည်မှုတွေကနေမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သင့်မြတ်ခြင်းတို့ ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ယှဉ်ထိုးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအတွက် (စစ်တပ်နဲ့ပက်သက်လာရင်) ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့အန္တရယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး သူမကတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး လက်နက်သုံးပြီး အကြမ်းဖက်မှုကို တားဆီးလို့ မရကြောင်း ၊ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးမှုတွေက အမုန်းတရားအပေါ်အခြေခံပြီး၊ ကိုယ့်ရဲ့ identity ပျောက်ဆုံးမှာ ကြောက်ရွံ့ စိတ်၊ မလုံခြုံမှုစတာတွေအပေါ်မှာသာ တန်ပြန်နေကြတာ ဖြစ်လို့ ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ လူနည်းစုတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊တွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ လူနည်းစု တွေကို ဆက်လက်ကူညီအားပေး၊ နားထောင်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် One Young World စင်မြင့်ကနေ သူမ ဘ၀တလျှောက် တွေ့ သိခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေ၊ အတွေးတွေ သင်ယူလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်။ One Young World တက်ရောက်လာကြတဲ့ လူငယ်များကိုလည်း သူငယ်ချင်းတွေ တိုးပွားလာအောင် ချိတ်ဆက်ကြဖို့ ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ရိုးရာ၊ ယုံကြည်မှုတွေကို လေ့လာပြီး နားလည်အောင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
Myanmar’s 60 year civil conflict is the longest running in the world and is the most complex because of the numerous ethnic and communal groups involved. Thinzar believes the county’s military constitution inhibits Myanmar’s path to true democracy and is campaigning for change. She also advocates for more trust and understanding between the various social factions. Her #MyFriendCampaign publishes positive stories about cross-cultural friendships, allowing moderate voices to be raised. Today people post on-line saying ‘despite our differences we can be friends’. She calls on One Young World to share their stories.
Thinzar Shunlei Yi - သဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်'s video.
dawnmanhon: မြန်မာလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ (၁၉၆) နိုင်ငံက လူငယ် ထောင်ကျော်ရှေ့ မှာ စကားပြောခဲ့သော(၅) မိနစ်စာ မိန့် ခွန်း